Hatsarana sy fahasalamana Fikarakarana fijery
Ao amin'ny tontolo maoderina, ny olana momba ny fanonerana ny tsy fahampian'ny fanjary dia tsy mamery ny maha-zava-dehibe azy. Indrisy, famokarana mahatsiravina, toe-javatra iainana ara-tontolo iainana mahavelona, ​​fihenan'ny sakafo tsy mahafa-po, ny kalitaon'ny sakafo ary ny antony hafa, toy ny teo aloha, dia mihatra amin'ny fahasalaman'ny nify amin'ny ampahany amin'ny lova. Saingy, sambatra ankehitriny, androany dia ilaina ny mametraka fanontaniana iray monja - inona ny karazana toeram-pahaizana dina ho tsara indrindra amin'ny tranga iray manokana.
Iza no mila toeram-pitsaboana?
Andeha hojerentsika ny antony hahalalàna ny karazana prostheses.
Ny olona ankehitriny dia tsy afaka manahy - Ny fanavaozana eo amin'ny toeram-pitsaboana dia afaka mamaha olana rehetra ary mamerina ny vatana nify na dia ao anatin'ny sarotra aza. Mazava ho azy fa azo atao ny miady hevitra fa maro ny olona tsy te-hametraka na dia ny fangalarana tsara indrindra aza, ary afaka mitandrina ny nify aloha. Nefa moa ve izy ireo dia milaza ny zavatra hitranga amin'ny rafitry ny toetr'andro amin'ny fotoana?
Aza mieritreritra akory hoe ilaina ny hamerenana ny nify. Na izany na izany, ny rafitra fanonerana dia mihatra amin'ny fetrany ary ny fahaverezan'ny nify dia mitarika ireto fanitsakitsahana manaraka ireto:
henjana amin'ny diksionera;
Olana amin'ny sakafo mena;
ny fanitsakitsahana ny mitefoka ary, noho izany, ny fanitsakitsahana ny asan'ny temporomandibular;
fampandrosoana na fanamafisana ny soritr'aretin'ny aretina parodontana;
ny endriky ny lozam-pifamoivoizana amam-bika;
ny fanamafisana ny nify mitsangana;
Inona avy ireo karazana toeram-pandihizana?
Ny karazana toeram-pitsaboana rehetra dia zaraina ho azo alaina sy tsy azo ovaina. Ny fikolokoloana azo afindrafana dia ireo prostheses "renibeny", izay matetika no milalao amin'ny horonan-tsary sy vazivazy. Raha ny tena izy, dia toy izany matetika ny fampiasana azy ireny sy ny fahamarinana amin'ny ankamaroan'ny zokiolona, ​​izay mifandray amin'ny fahavoazana nify avy amin'ny caries sy ny fahasarotana, parodontitis . Saingy tsy misy zavatra tokony hihomehy, satria manampy ny olona an-tapitrisany hiverina amin'ny fiainana feno, na amin'ny sakafo, na amin'ny resaka fifandraisana sy ny aesthetics, ny fisamboarana tsy azo avela. Ny endriky ity prosthes ity dia ny filàna ny fahadiovana isan'andro amin'ny prothèse.
Azo atao ny fingotra azo havaozina, izany dia miteraka ny tsy fahampian'ny nify tanteraka ao am-bava, ary ny ampahany - miaraka amin'ny fahaverezan'ny nify tsy manan-danja. Amin'ny ankapobeny, ny plastika acryl ny fitaovana fototra ho an'ny prosthetable azo alaina. Ny karazana toeram-pitsaboana azo amin'ny toeram-pitsaboana maoderina kokoa dia ny fangalarana tsy misy ilana azy. Ho an'ny famokarana azy, dia ampiasaina ny special nylon ny dantelina, izay manome ny toetra tsara indrindra amin'ny aesthetic, ny tanjaka ary ny fotoana lava fampiasana.
Ny toeram-pitsaboana voafaritra ampiasaina dia ampiasaina hanoloana ny fahavoazana kely ao amin'ny tranomaizina, ny fivalozana na ny endrika nify. Anisan'izany ireto:
Satro-boninahitra. Izy ireo dia vita amin'ny metaly, sermets (metaly metaly amin'ny plastika seramika), seramika, plastika.
Bridges. Asehoy ny fanorenana satroboninahitra maromaro, izay amidy amin'ny rongony, ary ny ampahany (1-3) dia manonitra ny hadisoana efa misy.
Tab. Ny mikroprostheses, izay matetika no vita amin'ny fitaovana serizy, izay mamela ny hamolavolana ny loko sy ny lokon'ny nify fa tsy mameno kariana sy ny fahasarotana.
Veneers. Porosaina matevina na plastika vita amin'ny seramika, izay ahafahana manala tanteraka ny fahasalaman'ny kosmetika eo amin'ny vavony.
Ny karazana proteinina tsirairay dia manana ny tombony sy ny tsy fahampiana, saingy raha ny zava-misy rehetra dia ny mpitsabo nify no manapa-kevitra hoe inona no entina hiditra ao anatiny, satria mifototra amin'ny zavatra maro samihafa.
Lip Care - ireo fitsipika fototra, ny fomba tsara indrindra ary 4 fomba mahomby
Vinylinum amin'ny stomatitis
Akanjo miaraka amin'ny aspirine sy tantely
Ahoana ny fomba hanesorana ny fivoahana amin'ny tarehy?
Atsangano ny tarehy
Inona no mahatonga ny gingivitis?
Satroboninahitra kely iray
Wedding akanjo amin'ny fomba tandrefana
Ahoana no handraisana ny hena ao anaty oven mikrofo?
Fampianarana ara-dalàna ho an'ny mpianatra
Lamina amin'ny tananao
Lily-Rose Depp dia nandeha tamin'ny daty miaraka amin'ny olon-tiany ho an'ny olon-dehibe noho ny fifaliana avy amin'ny paparazzi
Fiantrana marina: manampy an'i Kate Hudson hamonjy ny ankizy maty noana
Toy ny mahazatra hatrany: Melania Trump nandritra ny fihaonana tamin'ny filohan'i Panama sy ny vadiny
Efitrano ho an'ny zazalahy
Ny raozy sy ny vadiny Carey Hart sy ny ankizy dia hita eny an-dalamby manerana an'i Manhattan
Akon'ny trondro Aquarium
Aiza ny Taj Mahal?
Inona no lanjany voalohany?
Tavoahangy milete miaraka amin'ny ririnina ao amin'ny multifariate
Ny felam-bintana - ny soritr'aretina, ny antony sy ny fitsaboana fasisanitis plantar